Dhageystayaasha taleefannada gacanta ayaa loo habeeyay boosteejooyinka Android | Androidsis
Fabio | | Qalabka kale
Hadaad badanaa isticmaasho taada Xarunta Android si aad u dhageysato muusikada waxaa laga yaabaa inaad xiiseyneyso kuwan sameecado cusub in aan maanta dooneyno inaan idin soo bandhigno. Waxay ku saabsan tahay Kala duwanaanta BackBeat ee sameecadaha dhegaha ee rikoodhka ah ee ka yimaada Plantronics, oo si gaar ah loogu talagalay taleefannada casriga ah, gaar ahaan macruufka iyo Android.
Aynu ku bilowno Plantronics BackBeat 903+, Sameecad sameecadeed oo wireless ah kuna xirta taleefankaaga gacanta Bluetooth. Waxay leedahay badhan aad kagajawaabi karto oo aad ku jareyso wicitaanada taleefan ee laguu soo diro inta aad dhageysaneysid muusikada, iyo sidoo kale makarafoon labalaab ah. Kharashkiisuna waa 80 euros.
Qeyb ahaan, Warshaddii BackBeat 216 Waxay leedahay fiilooyin, oo aad wax ka beddeli karto heesta aad dhageysanayso iyo sidoo kale ka jawaabista iyo joojinta wicitaannada soo socda.
Waxay kaloo leedahay makarafoon. Sameecadani waxay u taagan tahay haysashada suufyo kala-goynta dhawaaqa leh oo leh sameecado yar-yar oo neodymium ah iyo fiilooyinkeeda dib looga noqon karo, dabeecad ka dhigaysa inaanay isku xidhnayn, wax aad u dhibsada isticmaalayaasha. Qiimaheeda waa 50 euros.
Waxay kaliya inooga hartay inaan ka hadalno Warshaddii BackBeat 116, oo aad ugu eg kii hore. Xariggiisa waxaa jooga ilaaliyaasha si ay wax uga beddelaan raadadka maqalka oo ay hoos u dhigaan una kordhiyaan mugga taranka, iyo makarafoonkooda si ay u awoodaan inay hadlaan ka dib marka ay soo kabsadaan wicitaan taleefan. Fiilooyinkeeda waa la celin karaa waxayna ku kacaysaa 30 euros.
Haddii aad xiiseyneyso inaad waxbadan ka ogaato waxa ku saabsan BackBeat kala duwan ee sameecadaha dhagaha lagu rido, booqo websaydhka Plantronics.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Qalabka kale » Sameecadaha taleefannada casriga ah ayaa loo habeeyay boosteejooyinka Android
Kuma xidhi karo 903-ka headphones ee gadaal gadaashiisa galaxi2plus…. Ma jiraa qof garanaya sida loo sameeyo?